မတျ 16, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ နေအိမ် ရုံး အလုပ်နေရာတွေကိုပါ ဆိုလိုတယ်။ မျက်နှာပြင်တွေကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းပေးမလဲ။ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ ထိုင်ခုံ၊ တံခါးလက်ကိုင်နေရာ၊ မီးခလုတ်၊ ရေအိမ်သာ၊ ပိုက်ခေါင်း၊ လက်ဆေးခွက် စတာတွေ။ ၁။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူ လက်အိတ်သုံးရမယ်။ နှာခေါင်းစည်းလိုမယ်။ ၂။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေချိန်မှာ...
ကင်းမွန်စားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သလား
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ကင်းမွန်စားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိပါသလား ဆရာ။ A. ပင်လယ်စာအမျိုးအစားထဲမှာပါတဲ့ ကင်းမွန်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိပါတယ်။ ကင်းမွန်လိုမျိုး ပင်လယ်စာတွေက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်...
၀မ်းဗိုက်ချပ်ရပ်ပြီး အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာစေသည့် အကောင်းဆုံး အစာခြောက်မျိုး
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အောက်ပါအစာတွေက ကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်ပြီး အူလမ်းကြောင်းရှိ ပိုးမွှားတွေကို ဟန်ချက်ညီ မျှတစေတဲ့အတွက် ၀မ်းဗိုက်ကို ချပ်ရပ်လှပ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ (၁) အမျှင်ဓာတ်နှင့် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးမှာ ဗီတာမင်၊ ဖိုင်တိုနျူးထရီးရန့်၊ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် စတာတွေ...